चुनावको मुखमा चर्चित कांग्रेश पार्टी नेता निष्कासित, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
चुनावको मुखमा चर्चित कांग्रेश पार्टी नेता निष्कासित, को हुन् उनि ?
काठमाडौँ। डडेलधुरामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्ल पक्षको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस, बीपीको नाममा नेकपा एमालेसँग तालेमल गरेको भन्दै देउवाले मल्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेका छन्।
विधान विपरीत गतिविधि गरेको कारण कांग्रेसको सदस्य समेत नरहने गरी उनलाई निष्कासन गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।मल्ल भने पार्टीले गरेको कारबाही आफ्नो जीवनमा अप्रत्यासित नभएको बताउँछन्।
देउवालाई झस्काउने तालमेल: पार्टीभित्र चर्को विरोध हुँदा पनि गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले स्थानीय चुनावमा सत्तारुढ दलहरुसँग तालमेलको निर्णय गराएका थिए । तर उनकै जिल्लामा सत्तारुढ दलहरु एक ठाउँमा उभिन त सकेनन् नै, कांग्रेसको एउटा समूहले एमालेसँग तालमेल गर्‍यो । जसको नेतृत्व मल्ल स्वयंले गरेका थिए ।
नेताहरुका अनुसार मल्ल पक्षले सात पालिकामध्ये कम्तीमा एकको प्रमुख आफूहरुले पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । तर संस्थापन पक्षले सुनुवाइ नगरेपछि एमालेसँग तालमेल गर्न पुग्यो । जिल्ला अधिवेशन धाँधलीपूर्वक गरिएको थियो, यसले असन्तुष्टि बनाएकै थियो,
’शेखर कोइराला पक्षका पक्षीय एक नेता भन्छन्, अहिले पनि कम्तीमा एक पालिकाको प्रमुख भएपनि दिनुस् भनेका थियौं। त्यसलाई नमान्न यो विद्रोह हुनपुग्यो ।मल्ल पक्षले दुई नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिकामा एमालेसँग तालेमल गरेको छ।
सहमति अनुसार कांग्रेस बीपीको चुनाव चिह्न करुवाबाट उम्मेदवारी दिएको मल्ल पक्षले तीन पालिकाको प्रमुखमा एमालेलाई सघाउने छ भने तीन पालिकामा एमालेले मल्ल पक्षको प्रमुखका उम्मेदवारलाई।
कर्ण मल्लमाथि कारबाहीको सूचना: कांग्रेस बीपी मल्ल पक्षबाट टेकबहादुर खड्काले आलिताल गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यहाँ कांग्रेसले बलबहादुर गुरुङलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ भने उपमेयरमा जला बोगटी उम्मेदवार बनेकी छन्।
सदरमुकाममा समेत रहेको अमरगढी नगरपालिकामा मल्ल पक्षबाट हरिप्रसाद भट्टले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने उपमेयरमा एमालेबाट यज्ञराज अवस्थीले । अमरगढीमा कांग्रेसले डिल्लीराज जोशीलाई मेयर र पार्वती झुकाललाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ।
परशुराम नगरपालिकामा मेयरमा मल्ल पक्षले एमालेका केशव बोहरालाई सघाउने छ भने उपमेयरमा मल्ल पक्षबाट गोपा थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसबाट भने मेयरमा भरत जोशी र उप मेयरमा कलावती बोहरा उम्मेदवार छन्।
अजयमेरु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका पदम पाल र उपाध्यक्षमा मल्ल पक्षका रामचन्द्र ऐर उम्मेदवार छन्। कांग्रेसबाट टेकराज पाण्डेयले अध्यक्ष र पूर्णिमा धामीले नेकपा विप्लवबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी छन्।
नवदुर्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा मल्ल पक्षबाट गोकुल शाही र उपाध्यक्षमा एमालेका वीरबहादुर विष्टले उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसबाट अध्यक्षमा लक्ष्मी अवस्थी र उपाध्यक्षमा निर्मला विष्ट उम्मेदवार बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाको गृह पालिका समेत रहेको गन्यापधुरामा पनि मल्ल पक्षले एमालेसँग तालमेल गरेको छ। मल्ल पक्षले अध्यक्षको उम्मेदवार लिएर एमालेलाई उपाध्यक्ष छोडेको छ । अध्यक्षमा सुरेन्द्र माली र उपाध्यक्षमा इन्द्र महरा उम्मेदवार बनेका छन्।
कांग्रेसले इन्द्र कार्कीलाई अध्यक्ष र ज्ञानु सेटीलाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। भागेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका रामबहादुर शाही र उपाध्यक्षमा मल्ल पक्षका नरबहादुर ठकुरानीले उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसबाट अध्यक्षमा हेमराज चटौत र उपाध्यक्षको उम्मेदवार पुष्पा ठकुराठी बनेकी छन्।
सभापति देउवाले निरंकुश व्यवहारले यो अवस्था आएको मल्ल पक्षका नेताहरु बताउँछन्। सभापति देउवा आफ्नै कार्यकर्तालाई रगतको आँशु पिलाएको भन्दै मल्ल पक्षीय जिल्ला नेता गुणाकर भट्ट भन्छन्, हाम्रो सम्मानजनक उपस्थिति भए कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनसक्छौं।
हामीलाई पेलेर निरंकुश प्रवृत्ति देखाए उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन। मल्ल समूह र एमालेको तालमेलले गठबन्धन गर्ने प्रयासमा त धक्का लाग्यो नै, नजिता पनि प्रतिकुल आउनसक्ने भएकाले देउवाले कारबाहीको कदम चालेका छन्।
मल्ल पक्षको दाबी छ, आफ्नो समूहसँग एमालेले गरेको तालमेल भएका सबै स्थानमा चुनाव जित्छौं ।लामो दोस्ती र दुस्मनीको श्रृङ्खला: डडेलधुराको राजनीतिमा देउवा र मल्लको सहकार्य र विवादको श्रृङ्खला लामै छ । अहिले कारबाहीको क्रममा त्यसको पटाक्षेप मात्र भएको हो।
मल्लका अनुसार २०४७ सालमा बेलायतमा अध्ययन सकेर डडेलधुरा आएका देउवासँग उनको एउटा गाउँमा भेट भएको थियो, जतिबेला उनी नेविसंघको जिल्ला उपाध्यक्ष थिए । त्यहाँबाट सुरु भएको सहकार्य देउवा प्रधानमन्त्री हुँँदा सचिवालयमा बसेर काम गर्ने तहसम्म पुग्यो।
२०५९ मा कांग्रेस फुटाएर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएका बेला भने देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधि मल्ललाई कारबाही गराए। डेढ वर्षसम्म कायम रहेको मल्लमाथिको कारबाही कांग्रेस, प्रजातान्त्रिकले कांग्रेसमा एकता गर्नुअघि नै फिर्ता भयो।
मल्ल फेरि देउवाको समूहमै सक्रिय भए । देउवाको साथ सहयोगमै मल्ल २०६७ मा कांग्रेस, डडेलधुराको सभापति पनि भए। डडेलधुरा कांग्रेसका नेताहरुका अनुसार देउवा र मल्लको विवाद २०७१ सालमा सुरु भयो, आरजु राणा देउवाले चाहे अनुसार मनकुमार थापालाई महिला संघको जिल्ला अध्यक्ष बनाउन मल्ल सहमत भएनन् ।
डडेलधुराको राजनीतिमा आफूलाई अवरोध गर्न खोजेको ठानेपछि देउवाले १३औं महाधिवेशनमा मल्ललाई जिल्ला सभापतिमै रोक्न खोजेका थिए। देउवा समूहले अघि सारेका रघुराज भट्टलाई हराएर मल्ल सभापति मात्र चुनिएनन्, केन्द्रीय महाधिवेशनमा देउवा सभापति लड्दा प्रस्तावक नै बसे।
तर दुई नेताको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। १४ औं महाधिवेशन झन बढ्यो। जिल्लाबाट पठाइएका नामहरु हटाएर केन्द्रबाट आफुखुसी क्रियाशील सदस्यता थपिएको भन्दै मल्ल पक्षधरले जिल्ला र केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बसेको थियो।
तर निर्वाचन समितिले अधिवेशन बदर गर्ने उजुरीको पक्षमा निर्णय गरेन। मल्ल पक्षले अधिवेशन बहिस्कार गर्दा पार्टी संस्थापन पक्षले डडेलधुरामा एकतर्फी’ जिल्ला अधिवेशन गर्दै भीमबहादुर साउदलाई अध्यक्ष चुन्यो।
त्यसयता समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका उनीमाथि मंगलबार भने थप कारबाही भएको छ। जहिले जहिले देउवा पार्टीको सभापति हुनुभएको छ, उहाँले मलाई निकाल्ने काम गर्नु भएको छ।
मल्लले टेलिफोनमा भने, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति हुँदा पनि जिल्ला अधिवेशन अघि निकाल्नुभएको थियो। अहिले झण्डै २० वर्षपछि निकाल्नुभएको छ।